MODA | Article Detail | Bubble Tea Crazy တွေအတွက် ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ရင် သွားထိုင်သင့်တဲ့ Bubble Tea ဆိုင်လှလှလေးတွေ
Bubble Tea Crazy တွေအတွက် ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ရင် သွားထိုင်သင့်တဲ့ Bubble Tea ဆိုင်လှလှလေးတွေ
Bubble Tea သောက်ရင်း ဓာတ်ဖမ်းလို့ရမယ့် ဆိုင်လေးတွေ
Bubble Tea ကို တစ်ရက် မသောက်ရ မနေနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရှိလား။ Bubble Tea Crazy တွေအတွက် Bubble Tea သောက်ရင်း ဓာတ်ဖမ်းလို့ရမယ့် ရန်ကုန်က ဆိုင်တချိူ့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပုံမှန် Bubble Tea ဆိုင်အများစုက Booth လေးနဲ့ပဲရောင်းတာကြောင့် အေးအေးလူလူ ထိုင်သောက်ချင်တဲ့ သူတွေရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ထိုင်လို့ရ၊ မရမသေချာသေးတာကြောင့် ဆိုင်ထိုင်လို့ရရင် အပြေးလေး သွားထိုင်ဖို့ Save သွားလိုက်တော့နော်။
One more tea.mm
စမ်းချောင်း၊ ညောင်တုန်းလမ်းထဲမှာရှိတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ အထဲက Decoration လေးက Aesthetic ဖြစ်တာကြောင့် Instagram အတွက်ဓာတ်ဖမ်းမလား မိမိုက်နေမှာပါ။
Mq bubble tea 29st
ပန်းရောင်မမတွေအတွက် တစ်ဆိုင်လုံးပန်းရောင်လုပ်ထားတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကိုလည်း သွားထိုင်ဖို့ လိုနေပြီနော်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Flamingo ကောင်လေးတွေနဲ့ Decorate လုပ်ထားကြောင့် အရမ်းကို Girl ဖြစ်ပြီး Cutie လေးတွေ သဘောကြိုက်မှာ အသေအချာပါ။
မြို့ထဲရောက်နေတဲ့အချိန် နေ့လည်နေခင်း Chill ဖို့ဆိုရင် Tea Talk လေးမှာ သွားထိုင်ဖို့ လိုမယ်နော်။ ဆိုင်အပြင်ဆင်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောဖို့အတွက် သင့်တော်မှာပါ။ ဓာတ်ဖမ်းလို့ရမယ့် နေရာလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်။
Time City မှာဖွင့်ထားတဲ့ Bubble Tea ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ အပြင်အဆင်က Premium ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးမှာပါ။ ထိုင်ခုံလေးတွေကလည်း အပြင်ကို ငေးလို့ရမယ့် နေရာလေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bubble Tea လေးသောက်ပြီး အေးဆေး Chill ချင်ရင် Must Go ပါနော်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hangout လုပ်မယ်၊ Bubble Tea မသောက်တဲ့ သူတွေလည်းပါတယ်ဆိုရင် The Tea Club လေးကို သွားကြည့်ပါလို့ Recommand ချင်ပါတယ်။ အစားအသောက်တော်တော်လေးကောင်းပြီး Bubble Tea စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အပြင် အခြား Drink တွေလည်းရှိတာကြောင့် ဂျီးများတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းရင် အဆင်ပြေနေမယ့် နေရာလေးပါ။ Indoor အပေါ်၊ အောက်အပြင် Outdoor ထိုင်လို့ရအောင်လည်း လုပ်ထားပေးပါတယ်။
#Bubble Tea Shop
#Yangon Bubble Tea Shop
မြင်ရုံနဲ့သွားရည်ယိုစေမယ့် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာ (၅) မျိုး
အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင် အားလုံးကတော့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးကိုမှရွေးချယ်ချင်ကြတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး ပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းစားရင်တောင် ဆီချက်မွှေးမွေးလေးဆမ်းထားမှဆိုတာမျိုးပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေအတွက်တော့ Luxury ဆိုတဲ့အရာဟာ ပစ္စည်း အသုံးအဆောင်တွေပေါ်မှာတင်မကပဲ အစားအသောက်တွေပေါ်မှာပါ အကျုံးဝင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်လာရတာပါပဲ။ ဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကလည်း သူရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ ထိုက်တန်လောက်အောင်ကို ရှားပါးပြီးအဖိုးတန်တဲ့အရာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှူတွေ ပေါင်းစပ်ထားတာမို့ မတန်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရပြန်ပါဘူး။ ဒီလို ဈေးအကြီး‌ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေထဲကမှ ထိပ်ဆုံးလို့ပြောရမယ့် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့သိချင်ကြသူတွေအတွက်ရော တစ်ချိန်ချိန်မှာ သွားစားဖို့ save ထားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရော စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့ သွားမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေနော်။
အခုစာဖတ်နေသူတွေထဲမှာ ဘာဂါကြိုက်တဲ့သူတွေရှိကြလား ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီဘာဂါလေးကိုရော တစ်ခါလောက် စားကြည့်ချင်ကြမှာအသေအချာပါပဲ။ Las Vegas မှာရှိတဲ့ Fleur Restaurant က ဖန်တီးစီမံထားတဲ့ ဘာဂါဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5000 ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတာလည်းမပြောနဲ့လေ။ တစ်ကီလိုကိုဒေါ်လာ100 လောက်တန်တဲ့ ဂျပန်ကတန်ဖိုးကြီးအမဲသားတစ်မျိုးကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး 1995ထုတ် Chateau Patris ဝိုင်နဲ့ချက်ပြုတ်ထားတာမို့ သူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တင် ဒေါ်လာ 2,500 လောက်တန်နေပါပြီတဲ့။
4. The Posh Pie
ပိုင်မုန့်ဆိုတာကတော့ ပီဇာနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးအရသာရှိတဲ့ မုန့်အချိုတစ်မျိုးပါ။ အခုပြောမယ့် ပိုင်မုန့်ကတော့ အဲဒီအရသာရှိတဲ့ ပိုင်မုန့်တွေထက်တောင် ပိုပြီးအရသာရှိပုံပါပဲ။ ဆစ်ဒနီက The Lord Dudley Hotel မှာရရှိနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ 12,000 ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ရှားပါးတဲ့မှိုတစ်မျိုး ၊ ကျောက်ပုစွန်ထုပ်ကြီးနှစ်ကောင် နဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အမဲသားတွေကိုထည့်သွင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်တဲ့။
3.Louis XIII Pizza
Pizza ဆိုတာ တော်ရုံဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်လောက်အောင် စားလို့ကောင်းတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးအဖြစ် အားလုံးလက်ခံကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပီဇာကိုတော့ စားဖို့ ငြင်းသင့်ရင်ငြင်းရပါလိမ့်မယ်‌။ အကြောင်းကတော့ ဈေးမတရားကြီးလို့ပါ။ အီတလီက အတော်‌ဆုံး Pizza ပညာရှင် Renato Viola ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီး ကျောက်ပုစွန်၊ Cavier ငါးဥ၊ အကောင်းစားချိစ်တွေ နဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကို Topping အဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ ဒီ Pizza ရဲ့တန်ဖိုးက ‌အမေရိကန်ဒေါ်လာ 12,700 ကျသင့်မှာပါတဲ့။
2.The Fortress Stilt Fisherman Indulgence
ဒီအချိုပွဲလေးကတော့ စားဖို့နေနေသာသာ မြင်ရင်ထိရက်မှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ သီရိလင်္ကာက The Fortress Resort and Spa မှာ ရရှိနိုင်ပြီး သီးသန့်ကြိုတင်မှာယူမှသာ ရနိုင်တဲ့အချိုပွဲတစ်မျိုးပါ။ ဒီအချိုပွဲထဲမှာတော့ ချောကလက်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့တံငါသည်ပုံလေးကိုမှ 80 ကာရက် မြကျောက်ပြာတစ်လုံးနဲ့အလှဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 14,500 ဖြစ်ပါတယ်။ ညာတာပါတေးနဲ့ ကျောက်များရောင်းသလားပဲနော်။
1.Grand Velas Taco
ကားတစ်စီးကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ဈေးနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်ချင်လား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီ ဟင်းပွဲလေးမှာစားဖို့အကြံပြုပါရစေ။ မက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့ Grand Velas Los Cabos ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဒီအစားအစာရဲ့တန်ဖိုးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ 25,000ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာတန်ဖိုးကြီးအမဲသား၊ ကျောက်ပုစွန်‌ ၊ Cavier ငါးဥနဲ့ ရှားပါးချိစ်တွေပါဝင်ပြီး အပေါ်ကနေ ရွှေပြားတွေ၊ ပွင့်ဖတ်တွေအုပ်ပြီးတန်ဆာဆင်ထားတာပါ။ လှလည်းလှ စားလို့လည်းကောင်းမယ့်ပုံပေါ်သလို ဈေးကလည်းရူးမတတ်ပါပဲ။ ဒီလောက်လှတဲ့အစားအစာကို အကယ်၍များ မှာစားဖြစ်ခဲ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ဖို့‌မမေ့နဲ့နော်။
သင်သောက်တဲ့ ကော်ဖီအမျိုးအစားက ပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
Happy Sweet December ပါ MODA စာဖတ်သူများရှင့်။ ဒီဇင်ဘာဆိုတာနဲ့ အအေးဓာတ်ကို ခံစားရပြီမို့ Coffee တစ်ခွက်က တစ်ရက်တာကို ပြီးပြည့်စုံစေတာ လက်ခံကြတယ်ဟုတ်။ Coffee မှာလည်း အမျိူးအစား အများကြီးရှိလို့ သင်က ဘယ်လို Coffee မျိူးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူလဲ။ ထူးထူးခြားခြား သင်အကြိုက်ဆုံး Coffee အမျိုးအစားက သင်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမှုအကျင့်တွေကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်တဲ့။ Editor ကတော့ ဖတ်လိုက်တာ တော်တော်များများတူနေတယ်။ What about you?
Espresso ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေက သဘာဝအတိုင်းကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပါ။ အလုပ်လည်း အင်မတန်လုပ်သလို ကဲဖို့အတွက်ဆိုလည်း လာထားဆိုတဲ့သူတွေပါ။ ဘယ်အချိန်၊ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အလိုလိုသိနေတတ်ပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်တတ်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဆက်ဆံရတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေပါ။
Latte Drinker ဆိုရင်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မပြတ်မသားဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေပါတဲ့။ အေးအေးလူလူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေရတာကြိုက်ပြီး ခေါင်းရှုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကို ရှောင်လေ့ရှိသူပါ။ Latte ပူပူတစ်ခွက်က စိတ်သက်သာမှုကိုရစေလို့ နေ့တိုင်း စွဲစွဲလန်းလန်းသောက်ကြတဲ့သူတွေပါ။
Cappuccino သမားတွေက အလွန်ညင်သာပျော့ပြောင်းကြတဲ့သူတွေပါ။ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ အမြဲကျော့မော့လှပနေတတ်သလို အတွေးစိတ်ကူးတွေကလည်း သစ်လွင်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ဖက်သား စိတ်ထိခိုက်နစ်နာမှာကို မနှစ်မြို့တဲ့သူတွေပါ။
ကော်ဖီအေးကြိုက်တဲ့သူတွေက ဆရာကြီးလုပ်တတ်တဲ့သူတွေပါတဲ့။ တစ်ခုခုဆို ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ရမှ ကြိုက်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖော်ပြတဲ့နေရာမှလည်း ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က Drama တွေ၊ အရှုပ်ဇယားတွေကို အာရုံထဲမှာ မထားတတ်တဲ့သူတွေပါ။
ကော်ဖီဆိုရင် ခါးခါးမှဆိုတဲ့ Black Coffee သမားတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Minmalistic Lifestyle ကို ခုံမင်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ပကာသနတွေကို မမက်မောကြသလို အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ သိပ်ပြီး အသားမကျတဲ့သူတွေပါ။ သင်နဲ့ ပေါင်းသင်း၊ ခင်မင်ချင်ကြတဲ့သူတွေ များလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီဆောင်းတွင်းမှာ ယမကာချစ်သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့ မြန်မာပြည်ထုတ် Rum
ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာပြည်ထုတ် Rum
ဒီ Holiday မှာ ပင်ပန်းသမျှတွေ လန်းသွားစေဖို့ တစ်စုံတစ်ခု လိုအပ်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာပြည်ထုတ် Generation Z ဆိုတဲ့ Rum လေးရှိနေပါတယ်။ London နဲ့ Bangkok တို့မှာ ရှိတဲ့ Bar တွေအထိ ခရီးဆန့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သလို အားပေးမှုနှုန်းမြင့်မားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Brand တည်ထောင်တဲ့ လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြည်တွင်းက ယမကာ Industry ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ ရောက်စေချင်ကြသလို အရည်အသွေးကောင်းကောင်း Product တွေနဲ့ ဂုဏ်ယူစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
San Franciso က ယမကာပြိုင်ပွဲမှာ ငွေတံဆိပ်ဆုရခဲ့ပြီး မြည်းစမ်းကြည့်သူ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဝယ်ဖို့အတွက်ကို စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက Rum ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ ကြံချောင်းနဲ့ ကြံသကာတွေသာ အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီး Gen Z Rum ကတော့ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဆန်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ လယ်သမားတွေကို Support လုပ်ရာ ရောက်လို့ Editor ကတော့ သဘောကျမိပါတယ်။
Packing ပိုင်းမှာ ကြည့်မယ်ဆိုလည်း သေသေသပ်သပ်ရှိသလို မြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးခြားပါတယ်။ Bottle Size တွေအနေနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Gathering လုပ်နိုင်တဲ့ 700 ml ကနေ အိတ်ဆောင် 90 ml ထိကြည့်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ Quality တော်တော်လေးကောင်းလို့ ဈေးများမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ သူ့ရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက အထင်နဲ့ အမြင်ကို လွဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆောင်းတွင်း ပိုချမ်းမယ်လို့ သိရတာကြောင့် ယမကာကို အသည်းထဲ၊ နှလုံးထဲကနေချစ်တဲ့ ဘော်ဒါတွေ၊ ဆွေမျိူးတွေကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ မြည်းစမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် NamSu, Madame EM’S နဲ့ House of Memories တို့မှာ ရရှိနိုင်တာမို့ ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ရင် သွား Try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Marketplace၊ City Mart နဲ့ Ocean တို့မှာလည်း ရနေပြီဆိုတော့ ဆိုင်တွေဖွင့်တဲ့အထိ မစောင့်နိုင်ဖူးဆိုတဲ့သူတွေ အမြန်ဆုံး ပြေးဝယ်လို့ ရနေပါပြီနော်။
#Generation Z Rum
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမူအကျင့်လည်းမတူသလို အကြိုက်ချင်းလည်းမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘယ်လိုမှထပ်တူကျဖို့မလွယ်ပဲ အကြိုက်တစ်မျိုးစီကွဲပြားတတ်ကြတာ အားလုံးအသိပါ။ တစ်ချို့က အချိုကြိုက်သလို တစ်ချို့ကအချဉ်ကြိုက်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ အခါးကိုမှသဘောကျတတ်ကြတာမို့ တစ်ဦးချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ရွေးချယ်မှူတွေရှိကြသလို ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း မတူညီတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေပိုင်ဆိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာအလိုက် ကိုယ်ဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းပေးမယ့် ဘုံ‌လေ့လာသတ်မှတ်ချက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး အခုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ ကိုက်ညီမှူရှိမရှိကို တချက် လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
အသီးအနှံ နဲ့ ချိုချဉ်သကြားလုံးလိုမျိုး ခပ်ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်တဲ့‌သူတွေကတော့ ဘ၀ရဲ့ဖိအားတွေကို ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာ၀အရည်အချင်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့မှာ ပတ်၀န်းကျင်ရဲ့ဖိအားတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူတွေများလာတဲ့အခါမှာလည်း ချိုချဉ်လေးတွေစားခြင်းဖြင့် ဖြေဖျောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အချိုဟာ စိတ်သက်သာမှူကိုပေးနိုင်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး အချဉ်ဓာတ်ကတော့ စိတ်ကျခြင်းတွေကို သက်သာစေတာမို့ ပြသနာတစ်ခုခုကြုံတိုင်း ဒီလို ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးတွေစားရင်းနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ ဘ၀အခက်အခဲတွေကို အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် အမူအကျင့်တွေရှိသူတွေလို့ဆိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာ ခဏခဏတွေ့ရတဲ့အတိုင်း Spicy 2x ,3x လို စပ်ပြဲလန်စားစရာတွေ ၊ ပူပူစပ်စပ်တွေကိုမှ ရူးရူးမူးမူးနှစ်သက်တတ်ကြတဲ့ အစပ်တစ်လိုင်းသမားလေးတွေ အများစုကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို သတ္တိရှိရှိနဲ့တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်လေ့ရှိပြီး ပြသနာတစ်ခုခုပေါ်လာခဲ့ရင်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာ၀န်ယူရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သဘာ၀မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ အစပ်ပြင်းပြင်းကိုကြိုက်သလိုပဲ နာကျင်မှူဒဏ်တွေကိုလည်း ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ အစပ်သမား အားလုံးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်။
ဒေသတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ အစားအသောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မစားဖူးတဲ့အစားအစာတွေကိုမှမြည်းစမ်းချင်တဲ့သူတွေရဲ့သဘာ၀ကတော့ အကြောက်တရားကင်းမဲ့ပြီး စူးစမ်းချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ လူစားမျိုးတွေပါ။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဈေးကွက်ကစားရတာ ၊စွန့်ဦးတီထွင်ရတာတွေကိုသဘောကျသလို ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားရတဲ့အားကစားမျိုးကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ ပြသနာကိုလည်း ရဲရဲရင်ဆိုင်ဖို့နောက်မတွန့်တတ်ကြပါဘူးတဲ့။
အချိုကဲတဲ့အစားအစာတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ သူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေလိုပဲ ချိုသာဖော်ရွေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကို အများအားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်တတ်ကြတယ်လို့ Personality and Social Psychology ဂျာနယ်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားဖူးပါတယ်။ သကြားလုံး ၊ကိတ်မုန့် အစရှိတဲ့ အချိုများတဲ့အစားအသောက်တွေကို မက်‌မက်မောမော ကြိုက်သူတွေဟာ လူမှူရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် နားလည်မှူအပြည့်ရှိပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတတ်ကြပါတယ်တဲ့။
5.Ice Cream Chillin Chillin
ရေခဲမုန့်ကြိုက်သူလေးတွေကတော့ အများအားဖြင့် ကလေးဆန်ပြီး စိတ်ရှင်းတဲ့လူစားတွေပါ။ ရေခဲမုန့်နဲ့ ရေခဲမုန့်ပေါ်ကထပ်တင်တဲ့ (Topping) အဆာပလာလေးတွေ အမျိုးမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်မှူပေါ်မူတည်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်ခြင်းနဲ့ ဘ၀ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်တည်မှူတွေအပေါ်ခုံမင်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘာ၀လေးတွေကွဲပြားသွားနိုင်ပါသေးတယ်။
အသီးအနှံတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရုံသာမက ဈေး၀ယ်ထွက်တိုင်း ကိုယ်စားနေကျ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုသာ ရွေးချယ်၀ယ်ယူတတ်ကြသူတွေကတော့ ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀နေထိုင်ပုံကို နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ကိုယ်စားတဲ့အစားအစာတွေလိုပဲ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်တတ်ကြသူတွေပါတဲ့။
ကော်ဖီကို စွဲလန်းစွာသောက်သုံးတတ်ကြတဲ့သူတွေ ဘယ်သွားသွား ကော်ဖီဗူးလေးတစ်ဗူးမပါမဖြစ်ဆောင်ထားတတ်တဲ့အထိ ကော်ဖီကိုနှစ်သက်ကြသူတွေကတော့ Personality အဆင့်သတ်မှတ်ချက် A သမားတွေလို့ဆိုပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှူပြင်းထန်တဲ့ဘ၀နေထိုင်ပုံ နဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်စွမ်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အပြင် တခါတရံမှာ လူမသိသူမသိ စိတ်ဖိအားများနေတတ်ကြသူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိစ္စရပ်တိုင်းကို အစီအစဉ်တကျ ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြပါတယ်တဲ့။
ပီဇာကတော့ လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သလို ဝေမျှခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုဆောင်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Pizza နှစ်သက်သူတွေဟာ အသင်းအဖွဲ့နဲ့နေရတာကိုနှစ်သက်ပြီး မျှဝေလိုစိတ်ပြည့်၀ကြသူတွေပါတဲ့။
Foodie လေးတွေအတွက်ဘယ် Snack & Food Online Shop တွေက မှာစားကြမလဲ
အိမ်မှာပဲနေရင်းနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပျင်းနေပြီလား။ အိမ်ကချက်တဲ့ ထမင်းတွေ၊ဟင်းတွေပဲစားပြီး ငြီးငွေ့နေပြီလား။ အစားတစ်လိုင်းလေးတွေ၊ Foodie လေးတွေနဲ့ ညဘက်ဆိုထထပြီး ဗိုက်ဆာတတ်သူလေးတို့ အတွက် အဆာပြေစားတဲ့ သရေစာ Snack လေးတွေ၊ Instant Noodle လိုအသင့်စားအစားအသောက်တွေနဲ့ Bakery Food တွေက အိမ်မှာမရှိမဖြစ် ဝယ်ထားသင့်တဲ့ စားသောက်ကုန်လေးတွေနော်။ K-Drama တွေ TV Series တွေကြည့်ရင်းနဲ့ပဲစားစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖုန်းပြောရင်းစားစား၊ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ Break Time မှာ အပျင်းပြေစားစား အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ Snack နဲ့ Food လေးတွေပါ။ စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရသာရှိတဲ့မုန့်လေးတွေစားပြီးနှစ်သိမ့်တာကလည်း လိုအပ်တဲ့ Self-Care လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စားတာလည်းစား လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ဖို့တော့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်။ ကဲ ဘယ်မုန့်ဆိုင်တွေက မှာစားလို့ကောင်းလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။
သူကတော့ Birthday Cake ၊ Celebration Cake တွေမှာယူလို့ရသလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Cake Design လေးကိုလည်း Customize လုပ်ပေးပါတယ်။ Cheese Lava Cake၊ Chocolate Lava Cake ကတော့လူကြိုက်များပြီး Editor Favourite ကတော့ Red Velvet Cake လေးပါ။ တခြား Cupcake၊ Brownie၊ Garlic Bread တွေလည်းရသလိုထပ်တိုးအနေနဲ့ Baked Sushi ပါမှာလို့ရပါတယ်။
Shop at https://www.facebook.com/thebakeroom.mm
es.cake က Cake နဲ့ Dessert လေးတွေကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့ စားရမှာတောင်နှမျောတဲ့အထိပါပဲ။ Sweet-tooth လေးတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ သူ့ဆီမှာတော့ Cake နဲ့ Sponge Cake လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းသလို နူးညံ့ပြီး Tasty ဖြစ်တာမို့ Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Cake ကိုတခြား Flavour တွေလည်းအများကြီးရှိသလို Cupcake လေးတွေလည်းမှာယူလို့ရတယ်နော်။
Shop at https://www.facebook.com/escakemm
HappyLife - Snack Paradise
အခု Online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Instant Food တွေနဲ့ Snack တွေကိုစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်တဲ့ Online Shop ပါ။ မိန်းကလေးတွေအကြိုက် ပူပူစပ်စပ် မာလာကြာဆံတွေ၊ Korean Instant Ramen ထုပ်တွေ၊ Candy မျိုးစုံ၊ အချိုမုန့်မျိုးစုံ အပြင် Cheese Ball လို Snack တွေပါ အကုန်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Editor ဆိုရင် စားချင်တာမှာချင်တာတွေက ရွေးချယ်စရာတွေများလွန်းလို့ ဘာမှာရမှန်းတောင်မသိဖြစ်သွားတယ်။
Shop at https://www.facebook.com/HappyLife-Snack-Paradise-107877390649731
SnackAholic မှာလည်း China နဲ့ Thailand ကတင်သွင်းတဲ့ Tasty ဖြစ်တဲ့ Snack တွေ Instant Noodle အထုပ်တွေ၊ Ready-to-Eat မာလာဗူးတွေအပြင် Bubble Milk Tea၊ Yoghurt Drink၊ Matcha Tea နဲ့ Banana Milk တို့လို Drink လေးတွေလည်းမှာလို့ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော်။
Shop at https://www.facebook.com/SnackAholicMM
ဒီ Snack online shop လေးကတော့ Aye Nyein 90's Snack ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့လို 90's Kid တွေကလေးဘဝက အရမ်းကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာ Snack လေးတွေအကုန်ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်။ တော်ရုံ မုန့်ဆိုင်တွေမှာ ပြန်ဝယ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့ Jumbo မုန့်၊ Jolly Stick သကြားလုံး၊ ပုစွန်မုန့်၊ ခေါင်းအုံးမုန့်၊ မိုးနတ်သူဇာ ယိုစုံ၊ နွားနီနို့မှုန့်၊ သရဲသကြားလုံးတွေကအစ မှာလို့ရတာနော်။
Shop at https://www.facebook.com/90sbornsnack
ဒီ 24 Hour Convenient Store ကနေ နာမည်ကြီး အာလူးကြော်တံဆိပ်အစုံ၊ Snack တွေ၊ Soft Drink တွေ၊ Instant Ramen တွေ၊ Chocolate၊ Waffle တို့လို Sweet Snack တွေလည်းအများကြီးရှိသလို နို့ဆီလေးစမ်းပြီး အသင့်စားလို့ရတဲ့ Frozen Strawberry လေးတွေလည်း ဝယ်ယူလို့ရတယ်။ ပိုကောင်းတာက တစ်ခုချင်းမဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း မုန့်အစုံပါပြီးသား Package Box/Set Box လေးတွေနဲ့လည်းမှာလို့ရတာမို့ အိုကေပဲပေါ့။
Shop at https://www.facebook.com/24hourconvenience
အခုမှဟင်းစချက်မယ့် Beginner တို့ဘယ် Youtube Channel တွေကို Subscribe လုပ်ထားရမလဲ
Stay Home မှာအပြင်က Food Delivery တွေ ခဏခဏ မှာစားရလို့ Budget တော်တော်ထောင်းနေပြီလား။ အပြင်စာတွေစားပြီး ဝိတ်တွေတက်နေပြီလား။ အပြင်စာတွေက အများသောအားဖြင့် Fast Food တွေဖြစ်တာကြောင့် အဆီဓာတ်နဲ့ Carbohydrates တွေအရမ်းများတာမို့ ရေရှည်စားတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Safe လည်းဖြစ်၊ အကုန်အကျလည်းသက်သာသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်အောင် အိမ်မှာပဲချက်စားကြည့်ရအောင်။
ကဲအိမ်မှာချက်စားတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ကိုယ်မှမချက်တာဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကိုယ်ချက်ချင်တဲ့ Recipe တွေကို Ingredient တွေသိဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ။ အဲ့ဒါသိသွားရင် ကျန်တဲ့အပိုင်းက အေးဆေးပါ။
YouTube Channel တွေကလည်းလေ့လာလို့ရတာမို့ Step-by-Step ကိုယ်စိတ်ကြိုက် Try ကြည့်လို့ရတယ်နော်။ အခုမှဟင်းစချက်မယ့် Beginner Foodie လေးတွေအတွက် လေ့လာလို့အကောင်းဆုံး Cooking YouTube Channel တွေကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုပဲသွား Subscribe လုပ်လိုက်တော့နော်။
အတူတူချက်စားချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း Mention ပေးလိုက်ဦးနော်။
The Food Lab ဆိုတဲ့အတိုင်း Laboratory ထဲမှာလို အခုမှစချက်မယ့်သူတွေအတွက် စနစ်တကျ၊ လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Food တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချက်ပြုတ်ပုံချက်ပြုတ်နည်းတွေကစလို့နောက်ဆုံး ပန်းကန်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အထိ တစ်ဆင့်ချင်းချက်ပြသွားတာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စားချင်စဖွယ်ကောင်းတယ်။
TV ရှေ့ထိုင်ပြီး Cooking Show တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီး အဲ့လိုချက်တတ်ချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ကူးမိဖူးလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်ကူးတွေကို Basic with Babish ကကူညီပေးမှာပါ။ Beginner တွေအတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ မီးဖိုချောင်အသုံးပြုနည်းတွေကစလို့ ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုလည်းအဆင့်ဆင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ့ ပေါင်မုန့်၊ Steak၊ Salad ပြုလုပ်နည်းတွေအပြင် Sauce စပ်နည်းတွေပါသင်ပြသွားမှာပါ။
Japanese Chef နဲ့ သူမရဲ့ Toy Poodle လေး Francis တို့အတူတူ စားချင်စဖွယ် Japanese Cusine၊ Bento Box လေးတွေ နဲ့ Japanese Dessert တွေကို ချက်ပြုတ်ပြထားတဲ့ Channel လေးပါ။ ဂျပန်ဟင်းလျာတွေကို Chinese နဲ့ Western အငွေ့အသက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ Cuisine တွေလည်းပါတာမို့ အယ်ဒီတာကိုယ်တိုင်တောင်ကြည့်ရင်းစားချင်သွားတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cooking Video လေးတွေပါ။
Indian အစားအစာတွေက အရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ မတူကွဲပြားပြီး လျှာပေါ်မှာစွဲကျန်နေရစ်တယ်။ ဟင်းချက်တာကို မချက်ချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့ပြီး Takeaway တွေမမှာခင် Chetna Makan ရဲ့ Food with Chetna ကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်နော်။ ဒီ Channel ထဲမှာ Traditional Homemade Recipe တွေကို အိမ်မှာအမေချက်ပေးနေသလိုမျိုး လွယ်ကူတဲ့ Step လေးတွေနဲ့ချက်နိုင်သွားမှာပါ။
သင်က အချိုပွဲ Dessert တွေကိုကြိုက်တဲ့သူ (ဒါမှမဟုတ်) ကိတ်မုန့်တွေဖုတ်ရတဲ့ Bakery Cakes တွေကိုလုပ်ရတာကြိုက်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ဒီ Channel ကို အရင်ဦးဆုံး Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါတော့။How To Cook That မှာတော့ သွားရည်တများများကျသွားစေရမယ့် Lillipop ၊ Gummy Bears ၊ Cupcake ၊ Éclair နဲ့အခုအရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ Rainbow Cake ပြုလုပ်နည်းတွေကပါ အသေးစိတ် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ပြင်သစ်တွေရဲ့ Cooking Recipe တွေလောက်ဘယ်ဟာက ကောင်းဦးမှာလဲ။ French Guy Cooking ကတော့ ကြည့်ရတာ Entertaining ဖြစ်တယ်။ Funny ဖြစ်တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူလိုက်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်။ ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေက Systematic ကျတယ်။ ပြင်သစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Cuisine တွေအပြင် Bakery မုန့်တွေဖြစ်တဲ့ Croissant နဲ့ Pain au Chocolat ပြုလုပ်နည်းတွေပါ စုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပါတယ်။
သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့ Veagn လေးတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ Channel ပါ။ The Easy Vegan ရဲ့ YouTuber Jules Aron က သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ Vegan Ingredients တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လိုက်ချက်လို့ရအောင်ပြသထားပါတယ်။ Aron ရဲ့ Content တင်ဆက်ပုံနဲ့ ဟာသတွေပြောတတ်တာကြောင့် ကြည်နေရင် ပျင်းတယ်လို့တောင်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ Channel ရဲ့နာမည်ကိုကြည့်တာနဲ့တင်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ တကယ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်က Try ပြီးချက်ကြည့်တိုင်း Fail ဖြစ်လို့စိတ်ကုန်နေသူ ဆိုရင်တော့ ဒီဟာကသင့်အတွက်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်လိုချက်ချက်မရသူတွေအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် Cooking Tips တွေကို Highlight လုပ်ထားလို့ပါ။ ဟင်းတစ်ပွဲရဖို့ မီးဖိုချောင်အကြီးကြီးမလိုဘူး၊ ပစ္စည်းကရိယာတွေအများကြီးမလိုဘူး၊ ဈေးကြီးတဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေလည်းမလိုပါဘူးတဲ့။
Philadelphia နယ်ဖွားညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Josh နဲ့ Mike Greenfield တို့ရဲ့ Brother Green Eats ကလည်း Youtube မှာ Popular ဖြစ်ပါတယ်။ အရာသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ Recipes တွေကို အချိန်တိုအတွင်း မှာ အလုပ်မရှုပ်ပဲချက်လို့ရတယ်ဆိုတာကို ပြသသွားတာပါ။ တစ်ရက်အတွင်း $3 နဲ့ ချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့ အစားအစာတွေ၊ Beginner ကနေ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်နည်းတွေထိအစုံရှိပါတယ်။
Health-Conscious အစားအစာတွေ၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် လုံးဝ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေစားတဲ့ Food တွေကိုမှချက်ချင်တာပါဆိုသူတွေအတွက် Alyssia Sheikh ရဲ့ Mind Over Munch က ကွက်တိပဲနော်။ Healthy Food တွေပြင်ဆင်ရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်လို့အော်နေသူတွေအတွက် Alyssia ကရိုးရှင်းပြီး ချက်လို့လွယ်ကူတဲ့ Weekly Meal တွေ၊ Bento Lunch Box တွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပြောပြမှာပါ။
သွားရည်တများများကျသွားစေမယ့် Korean Food YouTube Channel များ
အကယ်၍သင်က Korea ရေစီးကြောင်းတွေထဲက K-Drama၊ K-Pop တွေကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် South Korean တွေရဲ့ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့စားချင်စဖွယ် အစားအသောက် တွေ၊ ပလုပ်ပလောင်းအားရပါးစားပြနေတဲ့ Mukbangs Video တွေနဲ့ ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ချက်ပြနေတဲ့ Cooking Recipes Video တွေကိုတော့မကြည့်ပဲမနေနိုင်ပါဘူး။
Korea Culture တွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့ထဲမှာ ဒီလို Korean Food and Recipes တွေကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက မက်မက်မောမောစွဲလမ်းလာကြတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပဲမလား။ Korean Food Vlog တွေ၊ Mukbangs တွေကြည့်ရတာ Entertaining ဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ကို Motivate ဖြစ်စေသလို အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီး စားချင်စိတ်တွေလည်းတဖွားဖွားပေါ်လာစေတာတော့အမှန်ပဲ။
အဲ့လို Food Video တွေထဲမှာမှ “Mukbangs” လို့ခေါ်တဲ့ Video တွေက South Korea မှာ 2010 လောက်တည်းကစတင်ခတ်စားလာတာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူတွေ Billion ကျော်ထိရှိတဲ့ Youtube Channel တွေပါ။ Mukbang က စားသောက်ခြင်း(muk-ja) နဲ့ တင်ဆက်ခြင်း(bang-song)ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Mukbang Host တွေက Screen ရှေ့မှာအရာသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမြိန်ရည်ရှက်ရေစားသောက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်တဲ့ Video မျိုးတွေပါ။
အခုလိုအချိန်ညဘက်တွေလည်းဗိုက်ဆာနေကြမှာဆိုတော့ Video တွေကြည့်ပြီး သွားရည်ကျလို့ရအောင်၊ မျက်စိအရသာခံလို့ရအောင် Korea Top Food Youtube Channel တွေနဲ့ Mukbang Video Channel တွေကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
South Korea ရဲ့ Culture တွေ၊ ရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့ အစားအသောက်တွေအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ SweetandTastyTV ကမဖြစ်မနေကြည့်သင့်တယ်နော်။ Host ဖြစ်သူ Mina Oh က Korea နဲ့ America တစ်ခွင်မှာရှိတဲ့ Koreatown တွေကိုသွားရောက်ပြီး အဲ့က Korean စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ Streetfood တွေကိုမြည်းစမ်းပြီး Food Review တွေလည်းပေးထားပါတယ်။
Youtuber Mike Chan ကစိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုပေးစွမ်းသွားမှာပါ။ ရိုးရာ Dumpling မုန့်အပြင် Korea နဲ့ အာရှတစ်ခွင်က အစားအသောက်တွေကို ချက်ပြုတ်ပြ၊ မြည်းစမ်းပြထားတဲ့ Video တွေအများရှိပါတယ်။ United States အထိနာမည်ကျော်ပြီး နာမည်ကြီး Youtube Channels တွေဖြစ်တဲ့ The Try Guys တို့နဲ့လည်း Collaboration တွေပြုလုပ်ဖူးပါတယ်။
Daniel နဲ့ Katy တို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ Korean ရိုးရာ Home-Cooking Banchan Recipes တွေ၊ Dinner Dish တွေ၊ Lunch Box တွေနဲ့တခြားစားသောက်စရာတွေကို Step-By-Step စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို ပျင်းလည်းပျင်းမသွားရအောင် ရိုက်ပြနိုင်သလို Viewer တွေလည်းအခိုင်အမာရရှိပြီးသားပါ။
Mouth Watering ဖြစ်စေတဲ့ Cooking Videos တွေနဲ့ Recipe တွေကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ချက်ပြ၊ပြင်ဆင်ပြတာတွေကိုတဝကြီးကြည့်ရှုရမှာပါ။ Cookat Korea မှာဆို Korean Ramen တွေ၊ Kmichi Dish တွေနဲ့ အချိုပွဲတွေကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
Subscriber ရှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ Youtuber Keemi Kim ကသူရဲ့စားပြတဲ့ Mukbang နဲ့ Cooking Show ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ရိုက်ပြထားတာပါ။ သူ့ရဲ့ချက်ပြုတ်စားသောက်တဲ့ Video လေးတွေကပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Relaxed Vibe ဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူတွေနဲ့လည်း Live Stream တွေ၊ Challenge တွေလည်းလုပ်တဲ့သူပါ။
မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Yang Soo Bin ကိုမြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Yang Soo Bin ရဲ့ Mukbang Video တွေမှာ သူစားပြထားတဲ့ Culture ပေါင်းစုံရဲ့ Cuisine တွေကအရမ်းပဲစားချင်စဖွယ်ပါ။ သူအားရပါးရစားပြနေတာလေးကိုက ကြည့်ရှုသူကို Screen ရှေ့ကမခွာနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ပဲပြောရမလား။
မိခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို ချက်ပြုတ်ရတာကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ MommyTang က အထူးသဖြင့် Korean Vegan တွေအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ Korean Food တွေကို အိမ်မှာချက်ပြုတ်ရတဲ့ Homemade Style တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီ Dish တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Storyline လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ဖန်တီးထားပါတယ်။
Californian ကောင်ချောလေး Thien Le ရဲ့ Mukbag Video တွေကိုမကြည့်ခင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကြည့်ရတာနဲ့တင် Entertaining ဖြစ်နေပါပြီ။ Subscriber နှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ Channel မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်ပေါင်းစုံအပြင် Homemade Dish တွေကိုပါစားပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အရသာရှိတဲ့ Korean Food တွေနဲ့တခြား Fast food တွေကိုလည်းဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုတာ ညွှန်းထားပါတယ်။
#Food YouTube Channels
ဗိုက်မှာ ရှိတဲ့ အဆီတွေကို ကျစေမယ့် သရေစာများ
သရေစာဆိုလို့ ဒီ Link လေးကို ထောက်ကြည့်လိုက်တာမလား မလိမ်နဲ့နော်။ Stay Home ကာလာဆိုတော့ စားပြီးရင်းစားနဲ့ ဗိုက်တောင် မသိမသာဖောင်းလာပြီနော်။ ဗိုက်ပူတာက ဒီတိုင်းမသိသာပေမယ့် Dress လေးတွေ၊ Crop Top လေးတွေဝတ်ရင် ချက်ခြင်းကို ပေါ်လာရော။ လှတာ၊ မလှတာထက် ကျန်းမာရေးရေးအရ တော့ ဗိုက်က အဆီကိုလျော့ဖို့လိုပါမယ်။ Belly Fat က အစားအသောက်နဲ့ အများကြီးဆိုင်တာမို့ စားသောက်မှုပုံစံကို ထိန်းသိမ်းရမှာပါ။ မုန့်ကလည်း စားတာမလျော့ချင်၊ ဗိုက်လည်း အဆီကျချင်ရင်တော့ ခုပြောပြပေးမယ့် သရေစာလေးတွေက အစွမ်းထက်မှ သေချာပါတယ်။ ဒီလိုမျိူးလေးတွေများများစားလေလေ ခါးလေးကလည်းသွယ်လှလာမှာမို့ စလိုက်ရအောင်နော်။
ကိုးရီးယားက Idol တွေ ဝိတ်လျော့ရင် ကန်စွန်းဥတွေပဲ စားတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ အရသာကောင်းပြီး အဆီမတက်လို့ လူကြိုက်များပါတယ်။ ဗိုက်အဆီတွေ ခြေဖျက်ပေးပြီး အားအင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရေစာအဖြစ် ကန်စွန်းဥပြုတ်တွေကို စိတ်တိုင်းကျ စားနိုင်တယ်နော်။
Almond ကတော့ ခန္ဒာကိုယ်အတွက် ကောင်းတဲ့အစေ့အဆံအဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျော့ပါးစေခြင်းနဲ့ ဗိုက်အဆီတွေကျစေတဲ့ အစွမ်းအာနိသင်ရှိပါတယ်။ အာလူးကြော်တွေ တကျွတ်ကျွတ်ဝါးမယ့်အစား Almond စေ့တွေကို သရေစာအဖြစ် ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ သတိထားရမှာက လက်တစ်ဆုပ်စာခန့်သာ အဆာပြေစားဖို့ပါ။
ပေါင်မုန့်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီလိုလေးကို အစားသုံး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ ထမင်းဖြူတွေဖျက်ပြီး Whole Grain ကိုပဲ စားသောက်တာ ဗိုက်အဆီ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ Refine လုပ်ထားတဲ့ ဆန်တွေ၊ ဂျူံတွေအစား Oatmeal တွေ Whole Grain တွေကို ပြောင်းစားကြည့်ပါ။
Blueberry တွေကို မကြိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိမလဲနော်။ အသားအရေကောင်းစေပြီး ခါးလေး သေးသွယ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ Antioxidant ကြွယ်ဝပြီး အဆီဖုံးတာ၊ သွေးတိုးတာကို ကာကွယ်ပေးလို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Frozen Yogurt ခွက်တစ်ဝက်နေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးတာက ဝမ်းဗိုက်ထဲက အဆီတစ်လက်မစီ လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအရ Calcium ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်များများစားလေလေ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းထဲမှာ အဆီရောက်ရှိမှု နည်းပါးလေလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ Yogurt မကြိုက်ရင်တောင် အဆီမပါတဲ့ Calcium အစားအသောက်တွေကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Bubble Tea တွေအစား Apple Cider Vinegar ကို သောက်ပါ။ အလှအပအတွက်ကော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူအများကြီးရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် ပန်းသီးရှလကာရှည် နှစ်ဇွန်းသောက်သုံးတာက ဗိုက်အဆီအပြင် ခန္ဒာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပါ လျော့ချပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ Sugar များတဲ့ Bubble Tea သောက်မယ့်အစား ဒီ Magic Drink ကိုသောက်တာကမှ ပိုအကျိူးရှိဦးမယ်နော်။